Goatemalà: malalaka ny aterineto, afaka mamahana bilaogy ny olon-drehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2018 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, Português, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 26 Jona 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Indray andro tany Goatemalà, nisy ny korontana ara-politika, i Serrano Elías no Filoha, ary nosivaniny ny gazety. Tany amin'ny faramparan'ny taompolo 90 no nitrangan'izany ary Goatemalteka vitsy no tsara vintana tafiditra aterineto. Fitaovana mahagaga izany nampielezana ny vaovao any ivelany. Izany no fomba nampahafantarana izao tontolo izao ny zava-mitranga tao amin'ny firenena. Ireo manankatao ihany no nanana fahafahana niditra tamin'ny aterineto. Avy eo, nomena ny tsy miankina ny fifandraisandavitra, ary nohatsaraina sy naparitaka ny tolotra. Amin'izao fotoana izao, maro ireo olona no niala tamin'ny fahanginana nankany amin'ny finday, solosaina, ary nanomboka nianatra bebe kokoa momba ny hitenenany izay eritreretiny ao amin'ny tranonkala.
Manana bilaogy mampiady hevitra ny Tontolon'ny Bilaogy Goatemalteka: ny sasany mahakasika ny fomba fijery ara-politika, ary ny hafa mifandraika amin'ny olana saro-bahana, na avy amin'ny hafatra izany na avy amin'ny mpandefa hafatra. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba izany!
Folo taona talohan'io, tsy nisy mihitsy ny resaka re momba ny Tafika Goatemalteka – na tao amin'ny vaovao izany na tao amin'ny resaka nifanaovan'ny olona mahazatra. Izany indrindra no antony mahaliana momba ny fahitana bilaogera miaramila ao amin'ny Perspectiva Militar, izay ahafahanao mamantatra bebe kokoa momba ny fampiofanana sy ny fiainan'ny kaibil, mpikambana iray ao anatin'ny tafika miaramila somary nampiady hevitra. Afaka mamantatra bebe kokoa momba ny fomba fijery izay tsy matetika taterin'ny fampitam-baovao ihany koa ianao ao.
Tsy manana fanehoan-kevitra manohana azy ireo ao Goatemalà ireo teratanin'i Etazonia, na izany aza, nizara ny traikefany momba ny asa an-tsitrapo tany Goatemalà ireo Amerikana Tavaratra roa ao amin'ny GRINGOLOGUE, ary mahafinaritra ny mahita ny fomba fijery samihafa avy amin'ny olona avy any ivelany.
Izay azonao ampitahaina amin'i Homo homini lupus, bilaogera anaty fifanakalozana programa any Shily, sy elcharakotel , bilaogera izay nifindra monina nankany Eoropa. Samy nanolotra ny fomba fijeriny samihafa momba ny toe-draharaha mikasika ny bilaogera Goatemalteka izy roa ireo izay nanomboka namahana bilaogy tany an-tanindrazana ary ankehitriny dia mamahana bilaogy avy amin'ny fiarahamonina sy ny traikefa samihafa.
Tamin'ny fotoanan'ny fifidianana izay natao ny volana Septambra (2007), azonao jerena ao amin'ny Elecciones Guatemala ny momba izany izay voalohany nampiasana ny bilaogy tsy fitaovana ho an'ny mpanao fampielezan-kevitra fotsiny ihany fa ho an'ny mpijery ihany koa. Nahita ny fomba hanaparitahana ny drafitr'izy ireo ny antoko madinika izay tsy dia manana famatsiam-bola firy, toy ny Encuentro por Guatemala.
Ankoatra izay, nanana anjara toerana tao amin'ny tontolon'ny bilaogy toy ny iray izay ampiasan'ny GANACHINAUTLA ireo fikambanana ao an-toerana adino, eny fa na dia ny an'ny antoko ofisialy.
Nahita ny tombontsoan'ny fanaparitahana hevitra tao amin'ny aterineto Ireo Goatemalteka. Tonga ny Bilaogy! Matetika manoratra momba ny lohahevitra alohan'ny mpanao gazety ireo bilaogera Goatemalteka, ary nanomboka nampiasa ny sehatra izy ireo mba hampiroborobo hevitra, fomba fijery ary nanokatra izany ho an'ny fifanakalozan-kevitra. Na izany aza, zava-dehibe ny manasongadina fa ny fizakàna tsy fitovian-kevitra, eny fa na dia eo amin'ireo samy bilaogera aza, dia mbola olana hatrany. Fitaovana ny bilaogy, azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa saingy tsy maintsy tanjona iombonana ho an'ireo bilaogera ny fanajana ny tsy fitoviana sy ny fahalalaham-pitenenana.